द मोष्ट वान्टेड 'गोल्ड डन' गोरे भारत, थाईलैण्ड या दुबई, कहाँ छन् ? | Citizen Post News
द मोष्ट वान्टेड 'गोल्ड डन' गोरे भारत, थाईलैण्ड या दुबई, कहाँ छन् ?
२०७५ बैशाख १२ गते १०:१३
काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डसँग जोडिएका मुख्य आरोपित चुडामणि उप्रेती (गोरे) प्रहरीको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक खोजी सूचीमा परेका ब्यक्ति भएका छन् । जसका कारण तीन दर्जन बढिको जेलको बास भइसक्यो भने अझै एक दर्नन बढि अनुसन्धानको घेरामा छन् । गोरेका कारण नेपाली प्रहरीको हवल्दारदेखि पूर्व आईजीपीहरुसम्मको निद हराम भएको छ । सोही काण्डमा विभिन्न कारणबाट तीन जनाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा ज्यान गुमिसकेको छ ।
सोही काण्ड अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीभित्रै प्रहरीका विभिन्न यूनिटहरुले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उक्त घटनामा आधा दर्जन बढि प्रहरीको जागिर चट् भइसकेको छ । यद्यपि गोरे कहाँ छन् ? कसको संरक्षणमा छन् ? उनी किन पक्राउ पर्दैनन् ? प्रहरीसँग यसको कुनै उत्तर छैन् ।
जबकि नेपाल प्रहरीले गोरेलाई ईन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरिसकेको छ । रुपेश, गोरेलगायतका उपनामले चिनिने चुडामणिलाई डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएता पनि आँखिर उनी किन पक्राउ परिरहेका छैनन् ? किन उनको नाम गोरे राखिएको हो ? के विदेशी नागरिक भएकै उनको गोरे नाम राखिएको हो ? विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् ।
तर गोरे नेपाली नागरिक नै हुन् । उनी विदेशी भएको कारण गोरे उपनाम पाएको नभई उनको विदेशीको जस्तै गोरो अनुहार भएका कारण उनले गोरे उपनाम पाएका हुन् । मोरङ उर्लाबारीका गोरे उनको गाउँमा रुपेश नामले चिनिन्छन् । उर्लाबारी-७ मा उनको घर छ भने एकताका गोरेले भारतीय सेनामा जागिर खाने प्रयास पनि गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनी नेपाली सेनामा पनि भर्ना भएका थिए । उनले सेनाको तालिम पनि गरे । तर जागिर छाडेर दुबई भासिएका गोरेले दुबई प्रहरीमा समेत जागिर खाए भ्याए । सोही क्रममा दुबईमा अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड तस्करहरुसँग उनको राम्रो चेन बन्यो । त्यसपछि उनी नेपाल फर्केर सुन तस्करीमा लागे ।
गोरेलाई भारत र थाईलैण्डमा लुकेर बसेको चर्चा गरिएता पनि उनी दुबईमै रहेको प्रहरीको आशंका छ । किनकी उनको दुबईमा राम्रो नेटवर्क मात्र होइन, लुकाउन सहयोग गर्ने उनको सहयोगी पनि छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न दलहरुका नेताहरुसँग राम्रो सम्वन्ध बनाएका गोरेले सवैभन्दा राम्रो सम्वन्ध प्रहरीसँग बनाए । आफ्नो जालो नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा विछ्याउन उनी सफल भए । त्यसपछि नै उनको सुन तस्करीले उग्ररुप लिने क्रममा आपराधिक बाटो लियो । फोटोः गुगल फाइल